China Mgbidi Mgbidi Ọrụ China Manufacturers & Suppliers & Factory
Mgbidi Mgbidi Ọrụ - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Mgbidi Mgbidi Ọrụ)
150W Ụdị G Ga-eme Ngwá Ọrụ Ejike Ikike Uhie
150W Ụdị G Ga-eme Ngwá Ọrụ Ejike Ikike Uhie Ihe mmetụta anyị eduzi ọkụ ọkụ ọkụ na- eji ogo ighiri mma 3030 Diana Chip, nwere ike iguzogide mgbochi dị elu ma kesaa ìhè. Nke a na-eji ọkụ ọkụ ọkụ 100W na- eji ọkwọ ụgbọ elu dị elu, na asambodo CE ROHS abd afọ atọ. Ebe anyị na-anọ n'ọdụ ụgbọ mmiri na-enwu eji nkà na...
Mgbidi Nkume 50W Post Top Nkume Nnọchi 6500lm
Bbier Lamp Post Top Replacement 50W bụ EC ROHS ETL DLC Rated. Mpempe akwụkwọ Mgbasa Ozi na -abịa na akwụkwọ ikikere nke afọ 5! Sensor Pent a na- eweta ọkụ kachasị mma na ngwa gị na arụmọrụ siri ike nke karịrị 130Lm / W. Naanị 50W maka ihe karịrị 6500 Lumens nke ìhè ìhè 5000K! Ọ dịtụbeghị mfe ilekwasị anya na mpaghara...
150W Oghere Garage n'èzí n'èzí Ọrụ 240 volt
Bbier 150W Na-arụ ọrụ n'èzí Ọrụ bụ 130lm / w, 19500 Lumens na 5000k Ìhè na-acha, ETL DLC Nchịkọta ebe Damp. Nke a 150W Na-echekwa Ọrụ Ụlọ Ọrụ bụ 6 00W HID Replacement, 120-277V, Omume ọma jijiji, ujo, na mmetụta na-eguzogide ọgwụ. Anyị nwere ike iji 240 Volt Azụmahịa rụọ ọrụ ọ bụla na-arụ ọrụ ahia, dị ka ebe ndị...
200W High Bay Nkwado Ụlọ Ọrụ 5000K
Anyị waterproof 200w High Bay warehouse ìhè na- anapụta ihe 26,000 lumens. Na-ere ọkụ n'oge ìhè 5000K, nke a Na-ere Ụlọ Ahịa Ụlọ Ahịa na- eme ka arụpụta ihe oriri na ihe ọṅụṅụ ọ bụla na-arụ, ọrụ ugbo na ụlọ ọrụ ugbo, ụlọ ahịa azụmahịa na ihe ndị ọzọ! Nke a Low Bay Light bụ uzuzu na-eguzogide ọgwụ na-ehicha ma ọ bụ...
IP65 n'èzí mgbidi mkpọ ọkụ 100W
IP65 n'èzí mgbidi mkpọ ọkụ 100W Industrial Series N'èzí ada mgbidi mkpọ ọkụ System r eplace gị ochie wallpack na anyị Kacha ọhụrụ 2019 elu arụmọrụ Wall ngwugwu LED. Belata ọkụ eletrik gị na-eri ego ruo 80% site na dochie 300 MH / HIP / HID bulbs. Nchekwa ike na ọkụ ọkụ na-adịgide adịgide na-eme ka ngwugwu ọkụ...
Mgbidi mpịakọta 100W na-eburu ọkụ
Mgbidi mpịakọta 100W na-eburu ọkụ Industrial Series N'èzí wallpack 100W System r eplace gị ochie mgbidi mkpọ na anyị Kacha ọhụrụ 2019 elu arụmọrụ Wall ngwugwu LED. Belata ọkụ eletrik gị na-eri ego ruo 80% site na dochie 300 MH / HIP / HID bulbs. Nchekwa ike na ọkụ ọkụ na-adịgide adịgide na-eme ka ngwugwu ọkụ...
Mgbidi Mgbidi Ọrụ Mgbidi Mgbidi Na-egbu Ọkụ Mgbidi Mgbidi Mgbidi Mgbidi Egwu Mgbidi Mgbidi na-ada nkwụnye Mgbidi Mgbidi Na-agbada Mwube Ọrụ Ibu Ọrụ